Ghostbusters: Afterlife image တွင်အသစ်သော Stranger Things ကြယ်ပွင့်ကို Finn Wolfhard တွင်ကြည့်ပါ - သူစိမ်းများ
Ghostbusters: Afterlife image တွင်အသစ်သော Stranger Things ကြယ်ပွင့်ကို Finn Wolfhard တွင်ကြည့်ပါ
ဘယ်အချိန် Walker က Netflix တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်နည်း သုတ်သင်ရာသီ4လွှတ်ပေးသည့်နေ့, သွန်း, အကျဉ်းချုပ်, နောက်တွဲယာဉ်နှင့်ထို့ထက်ပို။
Ghostbusters: Afterlife တွင် Finn Wolfhard ကြယ်ပွင့်ကိုကြည့်ပါ
မှပုံသစ်တစ်ခု Ghostbusters: တမလွန်ဘဝ featuring ဖြန့်ချိခဲ့သည် သူစိမ်းများ မှဖော်ပြချက်အရ Finn Wolfhard သည်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည် ဒီဂျစ်တယ်သူလျှို ။
မင်းဆက်၏ရာသီ4သည့်အခါထွက်ကြွလာ
အင်ပါယာမဂ္ဂဇင်း လာမည့်ရုပ်ရှင်မှသီးသန့်ရုပ်ပုံများကိုမျှဝေခဲ့သည်။ အောက်ပါပုံကို Jason Reitman ၏ Instagram မှမျှဝေသည်။
မသိသောသူတို့အဘို့, Wolfhard အတွက်သရုပ်ဆောင် Ghostbusters: တမလွန်ဘဝ, ၎င်းသည် ၂၀၂၁၊ ဇွန် ၁၁ ရက်တွင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသည်။ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကူးစက်မှုနှင့်အတူလက်ရှိကမ္ဘာ့အခြေအနေအရထိုလွှတ်ပေးသည့်ရက်စွဲသည်ဆက်လက်တည်ရှိမည်လားဆိုတာကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ သူစိမ်းများ ဖြစ်စေမကြာမီတစ်ခုခုအတွက်ကြယ်ပွင့် သူစိမ်းများ ရာသီ4သို့မဟုတ် သရဲ။
Reitman ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးခဲ့တယ်။ သူကသူ့အလုပ်အပေါ်အကောင်းဆုံးလူသိများပါတယ် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Juno, နှင့်ပိုပြီး။ Reitman သည်လည်းမူရင်းသားဖြစ်သည် သရဲ ဒါရိုက်တာ Ivan Reitman
Jason Reitman မှတင်ပြသည် (@jasonreitman)
Instagram post မှဖော်ပြချက်အရ Wolfhard သည်ရှည်လျားသောဆံပင်အချို့ကိုလှုပ်ခါနေသည်။ မျှော်လင့်ခြင်း၏ဂုဏ်ယူအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အဖြစ်, ထိုမှကျော်သယ်ဆောင် သူစိမ်းများ ရာသီ4ကျနော်တို့သူ Mike ဝီကစားမယ့်အခါငါတို့သည်အချို့သောပိုပြီးသော့ခလောက်ကြည့်ရှုရ။
In Ghostbusters: တမလွန်ဘဝ, Wolfhard သည် Grace ၏အစ်ကို Trevor အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်နောက်ကျောကသူတို့အဘိုးရဲ့ဟောင်းအိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့, သူတို့သရဲတစ္ဆေ၏လောကသို့ထိုးနေကြသည်!
ငါတို့အတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကိုမျှဝေလိုက်သည် Ghostbusters: တမလွန်ဘဝ အောက်မှာ!
အမှုအရာရပ်အဖြစ်, Stranger အရာရာသီ4အပေါ်ထုတ်လုပ်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော။ ၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်အဆုံးသတ်တော့မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နွေ ဦး ရာသီတွင်အရာအားလုံးထုပ်ပြီးအပြီးသတ်ထုတ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါသည်။
အဲလိုဖြစ်ရင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဖြန့်ချိမယ့်ရက်ကိုငါတို့ကြည့်နိုင်ပါတယ် သူစိမ်းများရာသီ4။ ထိုအဖြစ်ပျက်လျှင်, ငါတို့ Wolfhard ၏အကြီးမားဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးနှစ်ခုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ် 2021 in Ghostbusters: တမလွန်ဘဝ နှင့် သူစိမ်းများ ရာသီ4။
Ghostbusters အကြောင်းအရင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိစေချင်ပါသည်။ Afterlife၊ ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Wolfhard ၏အခန်းကဏ္,၊ သူစိမ်းများ ရာသီ4။
သင်စောင့်နေစဉ် Wolfhard ၏ဤဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ သူစိမ်းများ မင်းသမီးလီယာအဖြစ် Co- ကြယ်ပွင့် Millie Bobby ဘရောင်း။
greenleaf ၏ရာသီ5ထွက်လာကြပါဘူးသည့်အခါ
အိမ်မှာတစ်ဦးတည်း Netflix 2018 အပေါ်ဖြစ်ပါသည်